Xisbiga S oo helay taageeradii ugu hooseeysay ee SCB - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xisbiga S oo helay taageeradii ugu hooseeysay ee SCB
La daabacay tisdag 1 december 2015 kl 14.27
Tira-koobka wuxuu dhacay 2-25 noveembar
Shantii ruuxba mid ee gaartay da’da codeeynta ee bulshada reer Sweden ayaa taageero u haysa xisbiga Sverigedemokraterna, sida ku cad tira-koobka ballaaran ee hayadda Tira-koobka SCB ay soo saarto iyo taageerada ey xisbiyadu heystaan.
Halka dhanka kale uu xisbiga Socialdemokraterna ku helay taageeradii ugu liidatay ee tira-koob ay soo saarto SCB, oo xitaa haddii ay xisbiyada waaweeyni taageero lumiyaan doorashada dabadeed, ay natiijada tira-koobkani ku tahay dhaka-faar xisbiga , sida ay sheegtay oo ku takhasustay culuunta siyaasadda dawliga Marja Lemne:
- Xaqiiqdii waa mid la oran karo iney aad uga welwel-san yihiin, maadaama taageeradaasi tahay mid aad uga hooseeysa taageedaii ey horay u heli jireen, sidoo kale waxaan iyaguna taageero sidaa u ballaaran helin xisbiyada ey xulufada yihiin. Waxaase laga yaabaa in la gaaray xilligii la gar-waaq-san lahaa in xisbiga S uu yahay xisbi bulshada ku haysta taageero aan ka badneyn 20-25%, sida xisbiyada dhiggiisa ee waddammo badan.
27,6% waa taageerada hooseeysa ee xisbiga Socialdemokraterna la sheegay iney ku heleen tira-koobka SCB ee noveembar, halka sidoo kale taageeradoodu si hubsiimi leh hoos ugu dhaceen xisbiyada ey xulufada yihiin S ee Miljöpartiet iyo Vänsterpartiet, kolka loo barbar-dhigo tira-koobkii bishii maajo.
Waxaan iyaduna jirin farxad ey la dabaal-degi karaan xisbiyada garabka midig ee Alliansen-ka, sida ay sheegtay Marje Lemne:
- Midda lala yaabo waxay tahay in xisbiga Moderaterna uu weli hoos u sii dhacayo, iyadoo uu weliba xisbigu uu is-bedel ku sameeyay siyaasaddiisii yeeshayna hoggaamiye cusub.
Siyaasadda uu xisbigu adkeeyay ee la xiriirta dhanka soo-galootiga ayaan soo jiidan taageero hor leh. Xisbiga M ayay taageeradiisu hoos u dhacday kolka loo barbar-dhigo tira-koobkii bishii maajo, uuna iminka helay 23,5%.
Xisbiga Moderaterna ayaa ka mid ah labada xisbi ee yeeshay hoggaamiyeyaal cusub (Fredrik Reinfeldt oo lagu badalay Anna Kinberg Batra). Iyo xisbiga, Kristdemokraterna (iyadoona Göran Hägglund uu jagadaa iska casilay isla-markaana ay kursiga ku fariisatay Ebba Busch Thor), ayuu xisbiga M weli taageero sii luminayaa. Xisbiga KD wuxuu saami u helay 3,5% waana taageero aanay ugu suurtageli lahayn inuu baarlamanka ku soo galo haddii doorasho ay dalka maanta ka dhici lahayd.
Garabyada siyaasadda ayay taageeradoodu tahay mid siman. Labada garab ee casaan cagaarka (S+MP+V) iyo afarta xisbi ee Allians-ka ayaa tira-koobku muujiyay iney ku heleen 39%.
Cidda guusha ballaaran ku hantisay tira-koobkan ayaa ah xisbiga Sverigedemokraterna, midkaasina oo ay taageeradiisu kor u kacday 5,5%, kolka loo barbar-dhigo midkii ka horeeyay ee bishii maajo. Iyadoona uu xisbigu hantiyay iminka 19,9%, waana arrin muhiim ah in la carabaabo, sida ay aamin-san tahay Marja Lemne:
- Maadaama aanu xisbiga SD ka muuqan saxaafadda sidii horay looga bartay. Waana mid loo qaadan karay in taageerada xisbigu hoos u sii dhaceeyso, maadaama ay siyaasadda soo-galootigu ahayd midda tooshku saarnaa.
Middaa ayaa lagu sharixi karaa inay doodda siyaasadda soo-galootigu tahay midda muhiimadda leh ee aanay ahayn sida uu xisbigu uga muuqdo saxaafadda.
Tira-koobka SCB ayaa la sameeyay muddadii u dhexeeysay 2-25 bishii noveembar, waana intii ka horeeysay kolkii ay dawladdu adkeeysay siyaasaddeeda soo-galootiga oo ku beegnayd 24-kii noveembar. Waa mid saameeyn ku yeelan karta taageerada shacabka, sida ay aamin-san tahay Marja Lemne, ahna caalimad ka howl-gasha jaamicadda Stockholm:
- Nasiib darro weeye inaan go’aanka dabadeed la sameeyn tira-koobka, waayo waxaa ka muuqan lahaa saameeynta uu go’aankii lagu adkeeynayay siyaasadda socdaalku ku yeeshay, sida ay sheegtay Marja Lemne, ahna caalimad culuunta siyaasadda dawliga ka dhigta jaamicadda Stockholm.